दुई पाङ्ग्रा जीवन
दुई पाङ्ग्रे यातायात को विश्वकोश
बाइकमा क्याडेन्स कसरी सुधार गर्ने?
श्रेणी: उपयोगी 0
राम्रो पेडलिङ ताल कसरी प्राप्त गर्ने? एक कुशल क्याडेन्स प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा सिफारिस गरिएको प्रति मिनेट 80 र 100 क्रान्तिहरू बीच रहनु हो। याद राख्नुहोस् कि…
तपाईंले सोध्नुभयो: आरामदायी साइकल सीट कसरी छनौट गर्ने?
साइकल सीट कसरी छनौट गर्ने? आफ्नो सिट हड्डीको चौडाइ मापन गर्नुहोस्। तर याद गर्नुहोस् कि काठीहरू विभिन्न चौडाइहरूमा उपलब्ध छन्। काठी को चौडाई मा निर्भर हुनेछ ...
तपाईंले सोध्नुभयो: कसरी आफ्नो बाइक सीटलाई चोट नपुगेको बनाउने?
बाइक सिटको लागि उचित उचाइ के हो? त्यो दूरीलाई ०.८८ ले गुणन गर्नुहोस्: बायोमेकानिकल अध्ययन अनुसार काठीको सही उचाइ…
द्रुत जवाफ: पछिल्लो मोटो Z के हो?
MOTO Z4 6,4-इन्च OLED डिस्प्ले (19:9) फुल HD+ रिजोल्युसन (2.340 x 1.080 पिक्सेल) प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 675 RAM4GB भण्डारण 128 GB + microSD 2…
साइकल सार्न पेडलिङको बल कसरी प्रयोग गरिन्छ?
उत्तर: स्पष्टीकरण: पिस्टन फेसनमा पेडल गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो हो, पेडललाई माथिबाट तल "थिच्ने" र यसरी खुट्टाहरू एकान्तरण गर्ने। सहि हो…
पहिलो मोटरसाइकल बीमा कति लाग्छ?
युवाहरूको लागि सस्तो मोटरसाइकल बीमा के हो? बाँकी प्रोफाइलहरूमा जस्तै, सस्तो मोटरसाइकल बीमा द्वारा प्रस्ताव गरिएको एक हो ...
एक साईकल चालकले हप्तामा कति घण्टा ट्रेन गर्छ?
एक पेशेवर साइकल चालकले हप्तामा कति घण्टा तालिम दिन्छ? हप्तामा 6-8 घण्टा पर्याप्त हुन सक्छ! त्यहाँ एक व्यापक विश्वास छ कि एक राम्रो स्तर हो ...
साइकल दौडको लागि बिहानको खाजामा के खाने?
साइकल चलाउने परीक्षणको समयमा के खाने? दौडमा एकपटक हामी बाइकमा छौँ, हरेक ४५ मिनेट वा प्रत्येक घण्टामा केही हल्का खाना खाने सल्लाह दिइन्छ।
द्रुत जवाफ: संघीय साइकल इजाजतपत्र कति लामो हुन्छ?
संघीय साइकल चलाउने इजाजतपत्र कति लाग्छ? स्पेनमा संघीय इजाजतपत्र लगभग €120-130 प्रति वर्ष हो र तपाईंलाई यस प्लाटुनको हिस्सा बन्न अनुमति दिन्छ र तपाईंलाई…
मोटरसाइकलका पोलहरूले कस्तो प्रकारको तेल प्रयोग गर्छन्?
मोटरसाइकलको पोलले कुन तेल प्रयोग गर्छ? म SAE W10 वा 80 वा 90W ट्रान्समिसन तेल वा 20W 40 प्रयोग गर्न सक्छु जसले झटकालाई भित्र समाहित गर्छ...
12... 470 अर्को
नमस्ते। मेरो नाम माइकल हो। मोपेड, मोटरसाइकल, साइकल, निस्सन्देह, कम्प्याक्ट र म्यान्युभेबल। तर यो केवल यो यातायात को सुविधा छैन, र मेरो ब्लग मा म तपाईंलाई यस प्रकार को यातायात को बारे मा सबै कुरा बताउनेछु।
MTB ह्यान्डलबारको उचाइ कसरी गणना गर्ने?
मैले सुरु गर्नको लागि कुन खेलकुद बाइक किन्ने?
द्रुत जवाफ: साइकलका सबै कम्पोनेन्टहरू के हुन्?
पहिलो मोटरसाइकल कसले बनायो ?
उत्तम जवाफ: कुन खेल राम्रो दौड वा साइकल चलाउने?
बाइक भिजेको बेला के गर्ने?
द्रुत उत्तर: पहिलो बाइक कहिले बनाइएको थियो?
© 2022 दुई पाङ्ग्रामा जीवन
सम्पर्कहरू | सोब्रे नोसोट्रास | गोपनीयता र कुकी नीति
ध्यान अधिकार धारकहरू! साइटमा पोस्ट गरिएका सबै सामग्रीहरू सूचना र शैक्षिक उद्देश्यका लागि सख्त रूपमा हुन्! यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि सामग्रीको पोस्टिङले तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ, कृपया हामीलाई सम्पर्क फारम मार्फत सम्पर्क गर्न निश्चित हुनुहोस् र तपाइँको सामग्री हटाइनेछ।